Nokia9Pureview သည် Android 10 ကိုစတင်ရယူနေပြီဖြစ်သည် Androidsis
Nokia9Pureview သည် Android 10 ကိုစတင်ရယူနေပြီဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Android 10 update သည် Nokia9Pureview သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်Snapdragon 845 နှင့် penta ကင်မရာပါရှိသည့် HMD Global ၏စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးသောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Fragmentation သည်ဤ OS ၏မူလပြproblemsနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်အမျိုးမျိုးသော Android ဗားရှင်းများကိုဖော်ပြပေးသောထုတ်ကုန်များစွာရှိနေသေးသည်။ ထို့ကြောင့် Android Nougat နှင့်အတူတူပင်မိုဒယ်တစ်ခုကို Android Oreo သို့မဟုတ် Pie နှင့်အတူရှာရန်မှာအဆန်းမဟုတ်ပါ။ Nokia သည်၎င်းကိုထုတ်ကုန်များစာရင်းတွင်မျှဝေရန်ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းကိုရရှိရန်ဝေးကွာသော်လည်း၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် update များကိုအများဆုံးထုတ်ပေးသောထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံရသောကြောင့်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းအားလုံးနီးပါးသည်နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်။ သူတို့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စွမ်းရည်များအရ၊
Nokia 8.1 သည်မိသားစုအတွင်းပထမဆုံး Android 10 update ကိုလက်ခံရရှိသူဖြစ်သော်လည်း HMD သည်ယခုနှစ်အကုန်တွင် Nokia 7.1 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒီ Android 10 update သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်။ အမှောင်စနစ်၊ အမူအယာအသစ်လမ်းညွှန်၊ စမတ်တုန့်ပြန်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် privacy နှင့်တည်နေရာထိန်းချုပ်မှုများအပြင် Family Link ။
# Nokia9PureView ပိုင်ရှင်များ၊ နားထောင်ပါ။ ?
နောက်ဆုံးပေါ် Android 10 update သည်သင်၏ဖုန်းများသို့ပြောင်းလဲသွားပြီ။ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောအတွေ့အကြုံကိုအသာပုတ်။ ယနေ့နောက်ဆုံးပေါ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုရယူပါ။ သင့်ဖုန်းကို Android 10 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင့်ဖုန်းတွင် Security Patch ထည့်သွင်းထားကြောင်းသေချာပါစေ။ pic.twitter.com/FBWookt6y6
- Nokia Mobile (@NokiaMobile) ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2019
Nokia9Purevies သည် ၅.၉၉ လက်မ P-OLED မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့် FullHD + resolution၊ Snapdragon 5.99. 845 GB RAM၊6GB ROM နှင့် ၃,၃၂၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်။ အဓိကဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ module တွင်တည်ရှိသည့်ကင်မရာငါးခုမှာ 128 MP ဖြစ်ပြီး selfie shooter သည် 3,320 MP ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Nokia9Pureview သည် Android 10 ကိုစတင်ရယူနေပြီဖြစ်သည်
အဆင့်မြင့် iQOO Neo 855 Racing Edition သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်သည်